VIP – Department of Medical Service
to post VIP news
Workshop on Private Healthcare Development ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
Posted on January 27, 2020 February 29, 2020 by nay win aung
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီလက်လှမ်းမီသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အားပြည်သူလူထုအားလုံးလွှမ်းခြုံမှုပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်Public Sector, Private Sector နှင့် EHO, NGO, INGO တို့၏ကဏ္ဍအားလုံးသည် တပြေးညီဖြစ်ထွန်းစေရန် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနခွဲသည် Workshop on Private Healthcare Development ကို (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် Hotel Max တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများနှင့် ၎င်းအခက်အခဲများအား... Read More | Share it now!
Posted on January 17, 2020 by Author 2
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိန်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာသီတာလှ၊ ဒေါက်တာကျော်ဇေယျ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမျိုးသန့်ခိုင်နှင့် အဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကို (၁၅-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လည်းကောင်း၊ မွန်းလွဲ(၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင်လည်းကောင်း ... Read More | Share it now!
Evaluation Workshop on Performance of Medical Social Workers အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ် ကျင်းပ
Posted on October 3, 2019 by Editor 1
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Evaluation Workshop on Performance of Medical Social Workers အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို မြတ်နန်းယုံဟိုတယ်၊ နေပြည်တော်တွင် (၂၅-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ(၂၇-၉-၂၀၁၉) ရက် နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဝန်ထမ်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာစေရန်၊ စနစ်တကျပီပြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရာတို့တွင် လျှင်မြန်လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်၊... Read More | Share it now!
Posted on October 3, 2019 February 29, 2020 by Editor 1
Workshop on Output from Evaluation of Hospital Performance Indicators အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း
Posted on September 28, 2019 by Editor 1
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် World Bank တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ဗဟို အဆင့်ဆေးရုံကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆေးရုံများ၊ မြို့နယ်ဆေးရုံများ၏ ဆေးရုံ စွမ်းဆောင်ရည် အညွှန်းကိန်းရလာဒ်များ ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော် Man Myanmar Hotel ၌ (၂၆-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၇-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာစိုးဦး၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊... Read More | Share it now!